Mmelite mkpọchi Coronavirus covid-19: Mgbe iteta n'ụra wee mata na ọnye gị dị, gịnị ka ị ga - eme? : Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 24 March 2020	• 16 Comments
isi mmalite: lithub.com/
Mgbe afọ 2020 malitere m chere na ọ ga-abụ afọ ihe isi ike. Hụ ụzọ ikpeazụ ga-esi mechie mkpọchi coronavirus nke 19 na-eme ugbu a na-enwe olileanya na ọ ga-agwụ n'oge na-adịghị anya. N’ememme Afọ Ọhụrụ, edere m, sị: “Dị ka m si chee, 2020 ga-abụ afọ nke inye mpụ na ndụ ga-agbanwe agbanwe. Mgbanwe ndị anyị na-ahụbeghị na akụkọ ihe mere eme. Oge agwụla agwụ nye ndị ọchịchị ụwa a. Ha nwere nanị afọ 25 fọdụrụ ruo mgbe oge ịbụ onye ụgha. ”
N'ime akwụkwọ m na njedebe nke afọ 2019, eburu m amụma na oria ọrịa ka ga-adị ma na-egosi na anyị na-ahụ usoro nje virus zuru oke. Dị ka mbido ọnwa Febụwarị 24, edere m otu edemede na-egosi na oge eruola. Nke ahụ bụ izu tupu ọ dị ka ihe mberede na Netherlands. Onyinyo nke usoro mgbasa ozi ghaputara nke (dika eleburu anya) Ndi IMB akwụkwọ ndị ahụ na-agbanye akwụkwọ mposi bụ, n'echiche m, aghụghọ usoro mgbasa ozi nwere ọgụgụ isi iji mee ka uche pụọ n'ihe ị kwesịrị ịzụta: nri ogologo ndụ, nri mkpọ, mmiri na ihe ndị ọzọ. Ọ dabara nke ọma, ndị na - agụ akwụkwọ nọ ebe a ọtụtụ oge tupu ụjọ ahụ daa.
A ga-ewepụ olileanya ahụ "ụlọ"
Ọtụtụ amụma ndị ọzọ ziri ezi sochiri n'izu ndị na-adịbeghị anya, ahụkwara m ihe ndị ga-esochi. Ọ bụ ya mere a na-ajụkarị m: "Gịnị ka m kwesịrị ime ugbu a?", "Kedụ ka m ga - esi merie usoro niile?"
Na social media anyị na-ahụ vidiyo dịka Janet Ossebaard gaa gburugburu. O gosiputara Donald Trump dị ka onye nzọpụta nke ụmụ mmadụ, a na-akpọkwa ndị na-ekiri ka edo onwe ha n'okpuru ihe ọ bụla na-eme ha. Vidiyo ya na-anwa ime ka ndị mmadụ kwenye na a na-egwuri egwu anyị, mana anyị na-ahụ nke ọma ọrụ abụọ nke mmegide na-achịkwa ebe a. Janet Ossebaard na-anwa ịmanye ndị mmadụ na nchekwa nchekwa Q-Anon. O kwukwara na Donald Trump ji ọrụ n'aka 'na cabalna na coronavirus na-arụ ọrụ na nke a.
Ihe ndị mmadụ na-aghọtaghị bụ na e mewo ọtụtụ usoro mgbasa ozi iji rụọ ụdị ihe abụọ a. Ha na-enye gị olileanya maka ịchekwa ndị ọbịa ma ọ bụ maka ọdịda nke cabal (ya na Trump dịka onye nzọpụta). Achọrọ m nyere ndị ahụ aka site na nrọ: Igwe ọkụ ọkụ agaghị ada.
A na-etinye ndị na-ekiri vidio ya na ọnọdụ egwu. Asị m ha:
Ndị na-anọdụ n'azụ igwefoto na-eme ka ị banye n'ọnọdụ adịghị mma ma mee ka ọ dị gị ka ha na-ahazi gị maka ya. Ọ bụ akụkọ na Q-Anon bụ ụlọ nzuzo nzuzo nke ndị gbara Trump gburugburu na-achọ iwepụ akụ ahụ na 1%. Ha na-abịa ịzọpụta gị! O di nwute. Mgbada. Nke ahụ bụ olileanya ụgha.
Trump bụ cabal. Trump dị ka ihe siri ike na-eme mkpọchi mgbochi. Foto akọwapụtara na ọtụtụ iri puku ndị agha Defender 2020 ndị agha dị njikere ihicha 'ụlọ' na Europe bụ olileanya ụgha.
Janet Ossebaard na-akpọku gị ka ịnọ jụụ n’ime mgbe ndị agha ndị a bidoro sachaa ndị isi. Nweta foto a?
Janet Ossebaard kwukwara na a ga-enwe usoro nrụpụta ego ebe akụ na ụba dị ugbu a na ndị ọgaranya 1% ga-agbadaghachi na ndị mmadụ. "Nnukwu onye nzọpụta Trump ga-ahazikwa nke ahụ maka gị." Ee e, ọ gaghị. Ihe ọ ga - eme (dị ka ndị isi Europe) ga - ewetara gị ụtụ isi n ’ọ ga - abụkwa na a ga - emebe nnukwu akwụkwọ ego, ụlọ akụ na ego penshion. Know ma ihe akpọrọ? Kọmunist.
Anyị na-atụgharị na usoro komunizim. Na ụgbọ oloko na-agba ọsọ. Akọwara m nke ahụ n'ụzọ zuru ezu isiokwu a.
Yabụ na anyị na-ahụ ntọala nrụpụta ego, mana ụdị na-abụghị Q-Anon na Janet Ossebaard na-agwa gị. Anọ m na-ekwu ebe a na saịtị ruo ọtụtụ afọ na nrụpụta dị otú a ga-abịa (lee ebe a). Nje virus a na-akpọ corona bụ ezigbo albi. Na enwere ike egwu ìgwè mmadụ ahụ n'otu ụzọ ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ dị oke egwu, mana akụkọ Janet Ossebaard jupụtara na ọnyà akụkọ ụgha (dị ka ebe a kọwara)
Usoro komunizim nke Janet Ossebaard na ọtụtụ ndị ọzọ na-etozi otuto ugbu a, ka ha na-akpọku gị ka ị nọdụ ala nwayọ, o nwere nsogbu. Ọ ga-abụ otu kompeni kompenila ọnụ bụrụ ọchịchị.
A ga-atụ anya na enwere ike bụrụzị ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ole ma ole ga-apụ n'ọhịa. Nke a nwere ike ịbụ nke kachasị n'ihi na ọ bara uru iji pawns ndị bidoro usoro a na-achị achị na 'ejiri aka mebiri emebi'. Ekwela ka echiche gi kpuchie ya na usoro mgbasa ozi ozo nke ndi isi ama ama ama agbaala arụkwaghịm. Nke ahụ bụ akụkụ nke ihe egwuregwu nchekwa Q-Anon.
Usoro komunistị teknụzụ nwere ike ịpụta na ị ga - enweta ihe doro anya (ego, ụlọ, wdg), mana teknụzụ ga-enyocha gị.
Nnukwu data usoro a na-ahụ maka ngagharị ọ bụla ị na-eme. Ọrịa coronavirus ahụ na-ahụ na enwere ike itinye usoro ndị ọzọ na teknụzụ ngwa ngwa. I kwesiri icheta otu Nyocha dijitalụ enweghị atụ, nke, dịka ọmụmaatụ, dekọtara nje virus ị nwere; ọ bụrụ na a gwọọ gị; ọgwụ na ọgwụ ị anduru na ahụike gị nwere ike inyocha gị ozugbo site n'igwe ojii. Then bụzi akụkụ nke ihe ịntanetị nke 5G.
Mgbe iteta n'ụra
Yabụ ọ bụrụ na iteta ma hụ usoro mgbasa ozi ndị ọzọ na-anwa ime ka ị nọrọ n'ọnọdụ anwụ na eziokwu nke agwakọta na ụgha ma na-enyere aka ịnabata ọchịchị Kọmunist na olileanya ụgha, ị ga-achọpụta na ha anaghị atụ gị aka na teknụzụ Nsogbu nke na-ara. Ha chọrọ ka ị nọrọ n'ime ime ka ndị agha na ndị uwe ojii mee ihe ha. E kwuwerị, ha bịara hichaa cabal. Ee e, ọtụtụ mgbe ụlọ ọrụ mgbasa ozi ga-akọ mgbanwe mgbanwe dị na The Hague ma ọ bụ Brussels; ma ha agaghị egosị gị ihe egwu ahụ. Egwuregwu chess a na-eburu n'uche ihe ị tụrụ anya ya, ka ị gaa n'ihu na-agbaso akụkọ ahụ.
Yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ n'ụra n'ezie, ị ga-enyocha echiche ụgha dịka akụkọ Q-Anon na Donald Trump. Ọ bụrụ n’ezie ịchọrọ iteta, ị ga-ahụ ihe na-eme ma ghọta na ọchịchị aka ike na-amalite. Ọchịchị ọchịchị ahụ apụtaghị. Ọ gaghị eme ọzọ. Nnwere onwe ndị enyere gị ohere ịnụ ụtọ ga-abịaghachi ma ọ bụrụ na ịnweta 'akara'. Nke ahụ ọ na-echetara amụma nke Akwụkwọ Nsọ? Ee, nke ahụ bụ ihe echezọ maka amụma nke Akwụkwọ Nsọ:
Nakwa na ọnweghị onye nwere ike ịzụta ma ọ bụ ire ere belụsọ onye nwere akara, aha anụ ọhịa ahụ, ma ọ bụ ọnụọgụ nke aha ya ”(Nkpughe 13: 16-17)
N’akwụkwọ m a kọwara m na anyị nọ n’oge ọgwụgwụ nke amụma. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-ahọrọ ileghara okpukpe anya n'oge a, ọ bụ ezie na enweghị m okpukpe onwe m, amatara m na ndị isi ụwa na-agbaso ebumnuche okpukpe. Ọ bụ n’enweghị ihe kpatara ya na Trump kwupụtara Jerusalem ịbụ isi obodo Israel, ọ bụghị n’efu na ha chọrọ iwughachi temple nke Solomon. N’akwụkwọ m a kọwara m etu ndị isi ụwa si soro ‘master script’. Ugbu a edemede edemede ahụ na-ekpachapụ nnọọ anya na ngwa-ngwa n'okpuru anya anyị.
i wee gh ota na atugidere gi
Anyị ga-achọpụta na n’oge na-adịghị anya na anyị akpọchigoro akpọchi kpamkpam. Echere m na ọ ga-anọ ogologo oge. Mustjọ ga-atụrịrị ndị obodo ahụ nke na ha ga-anabata ihe ndị e doro anya. Ọtụtụ ga-enwe ike ilele ndị si n'azụ windo na-ebufe ndị mmadụ ma ọ bụ na mbara ihu. Wepụrụ ya n'ihi na ọ nwere ike ibute ọrịa ma ọ bụ n'ihi na ha “egeghị ntị ntuziaka.” Ma n'ihi na onye ọ bụla nọ n'ụlọ nke aka ha, ọ nweghị onye na-enyere aka.
Lọ ọrụ mgbasa ozi ga-aga n'ihu ịgwa anyị na ị na-ahụ ụlọ ọgwụ na ahụike dị mma yana ọ nweghị onye ga-amata mmadụ ole ga-ala n'iyi. Ekele dịrị Janet Ossebaard ị chere nwayọ; na ntụkwasị obi "na Trump na-asacha cabal".
Eleghị anya anyị ga-enwetara mgbagharị na ndị na-apụ n'okporo ụzọ n'ihi ike ọgwụgwụ na agụụ na ya mere 'egela ntị ntuziaka ahụ'. Onye na-agbachitere 2020 dị njikere maka nke ahụ (ọ bụghị ihicha “ụlọ”).
Mgbe ahụ, mgbe ọnwa ma ọ bụ ikekwe otu afọ, ndọrọ ndọrọ ọchịchị ga-akọwapụta ntakịrị olileanya maka ahụ efe.
Olile anya na mgbasa akuko na ndoro-ndoro ochichi ga - emesia mebe ya n’abia bu na ogwu a na - egbochi oria ma mechaa nye ogwu. Enwere ike iche na nke a ga-ejikọta ya na iwebata usoro dijitalụ (dị ka akọwara n’elu), ebe ọ bụ ihe doro anya mgbe niile n’ebe onye ọ bụla nọ ma ọ bụ ọgwụ ọ natara, gụnyere nyocha ezigbo oge. ahụike (yana mgbakwunye CRISPR-CAS12) gụọ na ịrụ ọrụ).
Mgbe ahụ ị nwere ike ịga njem ọzọ. Site na mpaghara gaa na mpaghara, ọ gaghịzịkwa na mpaghara ndị ahụ niile mepere emepe, mana mpaghara mpaghara ga-aba ụba nke ukwuu na ọnụọgụ. Anyị na-enweta ihe dị iche n’etiti ndị mmadụ na-ahapụ ịbanye mpaghara ụfọdụ na ndị ọzọ ekweghị. Anyị na-aga n'ihu na "nzọpụta nzọpụta" nke teknụzụ zuru oke.
Gịnịzi ka anyị ga-eme? Anyị kwesịrị iguzogide eze na ntu? Ekwenyere m na enwere ikike mmadụ bụ nke na-ekwesịghị emebi emebi, nke ahụ bụkwa nnwere onwe. Ugbu a nke a mebiri emebi kemgbe ncheta oge ị nwere ike ịgaghị agbagha steeti ndị uwe ojii. N’ezie, ụdị mmegide ọ bụla ga-emesi obi ike. Ọbụlagodi na ị sị na mgbasa ozi ọhaneze ma ọ bụ na ebe obibi gị (ebe Siri nọ na-ege ntị) na ị na-ahụta na ha na - eme ihe ọchị, ị nwere ike ịnọ n'ọnọdụ oke ike.
Onye obula bu ihe na etinye ihe egwu ma apughi iwepu ya. Ihe a niile ga - eme n'okpuru njiri mara nke "njigide nke coronavirus", n'ihi na ndị na - agbasoghị ntuziaka ma ọ bụ ikekwe tụọ ndị ọzọ ndụmọdụ ka ha ghara ịgbaso ntuziaka ahụ bụ ihe egwu nye ọha mmadụ.
Enweghị m enweghị ndụmọdụ bara uru na ihe ị ga - eme. Eeh, mana nke ahụ bụ maka mgbanwe na mmụọ na echiche dị iche karịa ọnọdụ enweghị mmetụta nke usoro mgbasa ozi na usoro mgbasa ozi ọzọ na - egbochi gị ugbu a. Nke ahụ bụ ịgbalite ụdị onye ị bụ. Nke ahụ bụ maka ịgbalite ikike mpaghara ike na mbido mbụ gị. Nke ahụ na-ada ise mmiri, mana ọ bụghị. M na-akọwara gị ya, m kwere nkwa.
Site na ị hụ site na edemede ukwu na ime amụma ziri ezi, o doro anya na nke a bụ nzọụkwụ dị mkpa maka ezigbo mgbanwe. Ekwuru m ugboro ugboro na isiokwu 1 dị mkpụmkpụ maka nke a. Ọ bụ ya mere m ji rụọ ọrụ ogologo oge na akwụkwọ doro anya ma na-agụ. Yabụ, ị kwesịrị ịgụ ya. Ọ dị ezigbo mkpa ugbu a! Wee nwee ike gụọ mgbakwunye na akwụkwọ ahụ, ebe a na weebụsaịtị.
Anyị bụ ndị dị ike e kere eke ma oge eruola ka anyị pụọ n'ọnọdụ ọjọọ. Dị ukwuu karịa ka ị na-aghọta! Oge ịchọpụta.
Soro ederede a: gụọ ebe a
A mụrụ ndepụta njikọ: valcabal.nl
Tags: ANON, cabal, coronavirus, Covid-19, Donald, Ndi IMB, Janet, mkpọchi, Akpụ afụ ọnụ, ọrịa, Q, trump, ntiwapụ
Alie Muana dere, sị:
Maka n'efu inwetara, maka n'efu ị ga-enye…
Gini mere ịhapụputu ihe nzoputa gi n'efu?
Aghọtara m ị nweta ikike iji zụta akwụkwọ gị iji chọpụta azịza gị.
Echeghị m na nke ahụ kwekọrọ na mkpughe ị kpughere.
Ka enwere m ihe ọjọọ nke ahụ?
Ọ bụrụ n’aga ebe a na-ere akwụkwọ maka Baịbụl, ị na-enweta ya n'efu?
Ọ bụrụ n’ị gara n’ebe a na-eme achịcha maka ogbe achịcha, ị na-enweta ya n’efu?
Ọ bụrụ n’ịlele TV, do nweghi ndenye aha?
ị na-asị "n'ihi na ọ nweghị ihe ị nwetara, ọ nweghị ihe ị ga-enye ..."
Enweghị m ihe ọ bụla na - eme nke a n'efu karịa afọ 7, mana enweghị m ike ịrịọ nbipụta ahụ ka o bipụta akwụkwọ m n'efu.
Akwụkwọ a na-enye nchịkọta nke afọ asaa ahụ niile na ihe niile dị n'akwụkwọ ahụ bụ n'efu ma ịgụ maka n'efu achọtara ebe a. Mgbe ahụ ị ga-achọrịrị pịa site na edemede ruo na edemede. Agbanyeghị, akwụkwọ ahụ na-enye nchịkọta dị oke ọnụ ma mere ya; na-arịọ arịrịọ nke ọtụtụ ndị na-agụ akwụkwọ.
A na-ekele nkwado gị na ekele gị. N'ezie ọ dịghị mkpa. A na-ahapụ ya.
Esmeevd dere, sị:
Azụrụ m akwụkwọ gị! Ka m gbaa ume ruo ọtụtụ afọ. Naanị otu ihe ka dị gị mma na ịtụkwasị obi gbasara ozi bụ gị!
Ọ bụghị naanị ndị ọzọ m nụrụ gbasara.
Ajuju m guru dika ndi a.
Ogologo oge ole ka ha ga-eji kpọchie anyị? Pụtara na ụmụ wdg na ike na-nnọọ ogologo nri? Ewezuga nke ahụ na mmata niile ị nwere! Are adighi atu egwu na ha gha bulie gi ma obu mee ka i ghara inyocha ebe obula nwere ike iju gi (mgbe ufodu ị ju ebe ị) putara na ihe nile aghaghi iguta ya na intaneti. Ọ ga - enwerịrị ike ịhụ ka onye zụrụ akwụkwọ ahụ? Na ha ga-eme ihe na nke ahụ iji bulite gị. A ga m aghasi akwukwo gi nke oma. Hụ n'anya ma lekọta ya.
Nwanyị nwere nsogbu ugbu a, mana ịmara na anyị siri ike ma sie ike karịa ka anyị chere! Mana oleezi ka ajụjụ a ka di.
Nzaghachi gị nye Martin adịghị ọcha. Hapụ m
debe ya ebe ahụ.
A naghị edepụtakarị aha ha (ị maara ugbu a otu esi arụ ọrụ ... trolls, profaịlụ adịgboroja, bots ... mana ọkachasị ndị IMB'ers) onye na-aza mgbe ọ dị mkpa na ndị na-elekọta mmadụ na-anọgide kpamkpam na ndabere nke echiche ala.
Nke a bụ eziokwu nke a na-enyo enyo na mbụ, nkwenye anaghị ekwenye!
ỌNW FORNWA EZI NA NSỌ
Greta Thunberg na-enwe obi uto ya na umuaka ndi ozo
O doro anya na anaghị edobe ya anya na ọkara mita 😉
Ka ọ na-ehi ụra na Netherlands n'abalị na oge opupu ihe ubi wee jụọ oyi na -6 degrees Celsius n'oge opupu ihe ubi?
Yabụ, buru amụma….
Ee, ọ ga - amalite ịchọpụta (ọ bụrụ na ọ bụghị ihe ha chọrọ).
Amụtara m na omimi ị na-amaba n'ime oke oke bekee na mgbe ị jisiri chọta ezigbo isi mmalite (echere m na saịtị a kachasị mma na Netherlands) ọ na-adịwanye mfe igbogbo ọka (saịtị ndị ọzọ na-achịkwa) ).
Nzube gị na-adịwanye mma mgbe niile. (Echekwara m na afọ ole na ole gara aga na Baudet na egel farge dị ezigbo iche). N'ọnọdụ ọ bụla, ekwere m ugbu a maka 100% zuru ezu
99% ma ọ bụ karịa nke saịtị ndị ọzọ bụ mmegide na-achịkwa
100% nke ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị niile nọ n'ụwa niile na - achịkwa ndị oke ọnụ. (odighi otu a na - enyochaghi).
Kene !!! N’ikpeazu Ntinye ego di nkpa (nohee, guo akwukwo Mr Vrijland na November 2019)
Obi dị ọtụtụ ndị ụtọ na steeti a ga-abịakwute ha na ego!
Ego nke anyi dabere na otu steeti.
Ego anyị chọrọ, nke (ndị a na-enyo enyo na mbụ) nwere ọtụtụ ma anyị nwere obere, ọ bụ ugbu a zeros na ndị anyị enweghị ohere ịnweta.
Mana anyị nwere obi ụtọ na ego ọzọ, Martin etinyeworị akụkọ dị na ya, tupu mgbe ahụ, nkịta na-enweta oge ụfọdụ maka nke ọzọ dị mma, weta, Nọdụ, Nọdụ, Pak, Ezi
Ihe ngwugwu a dị mma, dị mma
Yabụ na America ha chọrọ ịme ụdị mmeghe na ego ha na enweta (ezinụlọ 3000 ka m kwere na). Nke a nwere ike bute ụzọ a na-akpọ obere ego nwa oge (nke nwa oge bụ nke na-adịgide adịgide) na US.
O yiri ka a ga - akwụ ụgwọ ego bụ isi na ego nkịtị (ụdị FED bitcoin) opekata m nụ ihe ahụ. Ya mere, mee ka ndị mmadụ niile mara na ego ọhụrụ nke otu eletriki eletrik.
Nke a ga-apụ n'anya n'ụwa niile.
Ọ dị ka ndị nọ na US na Eshia (mana anụrụ m ihe a kwuru) na-atụgharị ngwa ngwa 5G super ọsọ (na-enweghị nkwagharị n'ihi na ndị bi na-emezi ihe ndị ọzọ). Echere m na nke a ga-emekwa n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa.
N'Africa, ebe ọtụtụ mba ka nọ na 3G, amaghị m otu esi eme nke a.
Enwere ọbụna ikwu okwu banyere teknụzụ 6G, amaghị m ụdị egwu ga-eweta. Teknụzụ ọhụụ na-aga ngwa ngwa nke na ihe na-adọkpụ mgbe nke mbụ egosighi nke mbu.
Elon Musk nwere otu rọketi mara mma ndị a sịrị na-ebupute ọtụtụ Satellites 5G n'ime ikuku maka mkpuchi ụwa.
M na-eche otú nke a si teknụzụ, n'ihi na oge 5G ga-achọ obere anya, mana nke a bụ ihe ị na-ahụ na mgbasa ozi.
Ka ọ dị na Machị 19, 2020, COVID-19 anaghịzi ele ya anya dị ka nnukwu ọrịa na-efe efe (HCID) na UK.
.. belụsọ na Madurodam 🙂
Nke ahụ bụ n'ihi na Trump, Bolsonaro na Johnson niile na-anọchite otu ika: ika dị na aka nri
Ma dịka m dere ọtụtụ oge na ọtụtụ edemede, ndị mmadụ dịka Robert Jensen, Alex Jones na ndị ọzọ dị ka ọnụ na-ekwusi okwu kwesịrị ịbụ nnukwu netwọ nchekwa. Ha aghaghi inweta ọtụtụ ndị na-eso ụzọ ha na-akatọ usoro mgbasa ozi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ha aghaghi inye aka wuo udi ihe ahu ma jikọta ya na ihe omuma ya na udi ya. Ha aghaghi jikọta njiri mara nke ọma na ogige Trump (Trump, Bolsonaro, Johnson).
Mgbe ahụ (a ga-akọwapụta nke ọma) ika ahụ ga-agbakọ elu. Thatzọ a họrọla ugbu a bụ okporo ụzọ “Ha na-eme onwe ya ka ọ ghara jọrọ njọ na oria ojoo coronavirus”. Ya mere ika obula di n’aka nri jikọtara ya na ‘coronavirus rikicin denitors’.
Mgbe ahụ gbanyụrụ okwu ahụ kpamkpam. Mgbe ahụ Trump na Bolsonaro na Johnson (njedebe nke Brexit) ga-ahapụ ubi ahụ ma cabal ọkwa ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke aka ekpe na-eweghachi ọzọ ma ndị nkatọ ahụ abanye n'ụlọ nga; onweghi onye kwesiri inwe obi abụọ banyere usoro mgbasa ozi kachasị.
N'ihi: ọchịchị nzọpụta "nke nzọpụta" gụnyere ndị uwe ojii chere.
Daalụ Martin maka nghọta gị. Azụtara m akwụkwọ gị dịka PDF n'ihi na amataghị m na ngụkọta mkpọchi ahụ ga-abịa, mana ọ bụbebebeghị ugbu a, anyị “mara mma” ndị Dutch nwere ike ijikwa “mkpọchi amamịghe”. Ekwesịrị m ikwu na adara m otu oge n'ihi na echere m na ọ bụ ihe na-enweghị ihe kpatara ya na ịdepụtara ụdị mmadụ niile dị ka ihe ngosi na-achịkwa, mana ahụla m ugbu a na ị dị mma karịa ka m chere n'oge ahụ. Kemgbe Charlie H, atụgharịrị m n'ime oke ịkpa oke - okwu m masịrị ịghara iji ya ọzọ n'ihi na amaara m ugbu a na ọ bụ ihe atụ maka pedophile sodomy - ma n'ezie ọtụtụ ndị nwụrụ anwụ agbanweela na ebumnuche. O juwo m anya n’uzo n’onu mmadu n’iile n’iile dika aturu nke dara ada site n’egwu na –emechi ulo na ndi mmadu igha. Ebe asụsụ bụ ụdị ịkọwa okwu, okwu abụọ a nwere akarị karịa ka i chere na mbụ. Mkparịta ụka nke nwere anya anụ ahụ ma mmekọrịta mmadụ na ibe ya nso nwere mmetụta ọfụma. Na mkpọchi, n’ezie, na-ezo aka mkpọchi mkpụrụ obi anyị ma ọ bụ sitena sel stem ka ị na-akpọ ya.
Bill Wesick nke ihe-omimi ajuju nke101, adighi adi na YT kama na ndetu egwu ya, na ugbua na theocs101ark.com bu nke kwesiri ekwuputa ideputa okwu nzuzo Saturn Luciferian nke oria bu oria bu ezigbo oria. Gaghị ahụ ya ruo mgbe ị ghọtara. Ọ dị nwute na, 99% n'ime anyị atụrụ na-ahụghị ya.
Enwere m afọ mgbu mgbe m na-eche maka ihe na-echere ihe a kpọrọ mmadụ, mana gbalịsie ike iji nọgide na-ejikọ m na koodu mbụ m. Enweghị m ọtụtụ ihe ndị ọzọ m ga-eme ...
" Biko rụba ama: ihe ndekọ Covid-19 Janet Ossebaard (Ninefornews) bụ ọnya akụkọ ụgha
Trump, Q-Anon na 'nhicha akụkọ ifo dị omimi' (Robert Jensen, Janet Ossebaard) »
Nleta nile: 1.241.956
SalmonInClick op Coronavirus, Q Anon, Trump, Bolsonaro, BoJo, omimi miri emi na mechiri ịntanetị na Eprel 1?
Onye nwe ya op Coronavirus, Q Anon, Trump, Bolsonaro, BoJo, omimi miri emi na mechiri ịntanetị na Eprel 1?
Future op Coronavirus, Q Anon, Trump, Bolsonaro, BoJo, omimi miri emi na mechiri ịntanetị na Eprel 1?